सिद्धार्थ हस्पिटालिटीको सेवा मोबाइल बाटै « Tattatokhabar
सिद्धार्थ हस्पिटालिटीको सेवा मोबाइल बाटै
काठमाण्डौ । हस्पिटालिटी सेवामा झन्डै २५ वर्ष लामो अनुभव बोकेको सिद्धार्थ हस्पिटालिटीले आफ्नो सेवा मोबाइल एप्सबाट उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । सिद्धार्थले काठमाण्डौं देखि पश्चिम महेन्द्रनगर र पूर्व बिर्तामोड सम्म देशका विभिन्न २४ स्थानमा शाखा सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त एप्स डाउनलोड गर्नका लागि Siddhartha Service टाइप गरी डाउनलोड गर्न सकिने छ । एप्सबाट खानाका विभिन्न परिकार अर्डर गर्ने देखि होेटलका कोठाहरु बुक गर्न र अनलाइन बाटै संसारभरि बाट बिलको पैंसा तिर्न सकिनेछ ।
विदेशमा बस्नुहुनेले नेपालमा रहनुभएका परिवार, आफन्त र साथीहरुलाई विभिन्न अवसरमा हाम्रो सेवा प्रयोग गरी विभिन्न उपहारहरु दिन सक्नुहुनेछ । उक्त सेवा प्रयोग गरे वापत खल्ती, इ(सेवा, भिसा र मास्टर कार्डको प्रयोग गरी स्वदेश तथा विदेशबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
सिद्धार्थले आफ्ना रेगुलर ग्राहकलाई आफ्नो सदस्यता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल सम्म १० हजार बढी ग्राहकले यो सेवा प्रयोग गर्दै आएका छन् । जसलाई Silver, Gold र Platinum Member गरि ३ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ र कम्पनीले विभिन्न समयमा विभिन्न Offer, Discount Package & Scheme जस्ता सुविधाहरु साथै आफुले तिरेको रकमबाट बोनस (Reward Points) समेत उपलब्ध गराउदैं आएको छ । उक्त सुबिधा लिन चाहनेका लागि APP बाटै फारम भरी Free मै Membership लिन सकिने ब्यबस्था उपलब्ध गराइएको छ ।
Member नभएकाहरुले पनि APP मा Continue as Guest मा Click गरी सेवा प्रयोग गर्न सकिनेछ । अर्डर गर्दा हाललाई १५% छुट दिनुको साथ साथै रु. ५ सयभन्दा माथिको अर्डरमा हरेक शाखा बाट ३ कि. मि सम्म फ्रि-डेलिभरीको व्यवस्था गरेको छ ।